Dhismaha Maxkamadda Ciidanka Qalabka sida oo meel wanaagsan maraya+Sawirro – Beegsonews-Wararka maanta
Home WARARKA MAANTA Dhismaha Maxkamadda Ciidanka Qalabka sida oo meel wanaagsan maraya+Sawirro
Dhismaha Maxkamadda Ciidanka Qalabka sida oo meel wanaagsan maraya+Sawirro
Taliyaha qaybta 21-aad Gen; C/Casiis C/laahi Cabdi “Qooje” iyo Saakiisha Maxkamada Ciidanka Qalabka sida qeybta 27-aad ayaa kormeeray dhismaha xarunta Maxkamada ciidanka qalabka sida qaybta 21-aad oo laga hirgalinayo Magaalada Gaalkacyo oo xilligaan maraya meel gaban gabo ah.
Kormeerkan waxaa qeyb ka ahaa ku Xigeenka Xeer-ilaalinta Maxkamadda Ciidanka Qalabka sida ee Soomaaliya G/le “Keyse” , iyo Saraakiil kale.
Saraakiisha ayaa u kuur gashey waxyaabaha ka dhiman xarunta Maxkamada oo hirgelinteedu horseedi doonto in la qaado dacwadaha loo heysto eedeysanayaal ku Jira Xabsiyada kala duwan ee Ciidanka.
Taliyaha qeybta 21-aad ayaa tallaabada dhismaha xaruntaan ku sheegey in ay ka mid tahay juhdiga uu taliskiisu tan iyo markii lasoo Magacaabey ku bixiyay dhismaha xarumaha adeegga ee Ciidanka, isagoo intaa raaciyay in ka shaqeysiinta Maxkamaddu ay tusaale buuxo u tahay Dowladnimada iyo kala sarreynta sharciga Dalka.
Previous articleDacwaddii Badda ee Soomaaliya iyo Kenya oo mar kale dib loo dhigay
Next articleRa’iisul Wasaare Khayre oo Washington uga qeyb galay shirka IMF iyo Bangiga Adduunka +Sawirro
“Somaliland 28 Sannadood Ayay Ku Muujisay Dimuqraadiyad Iyo Xasilooni Siyaasadeed Iyo...
Abaal arday loo galay waligii kuma ilaawayo, sheekadan dhamayso.